Sida Loogu Xulo Xadhigga Fiilooyinka Ugu Wanaagsan Ee Loogu Talagalay Android | Androidsis
Sida loo doorto xeedho wireless ah taleefankaaga Android
Khadka wireless-ka ayaa ku sii kordhayay joogitaanka Android. Dhawaan waxaan ka hadlaynaa sida ay u shaqeyso, waxaa u sii dheer sheegida qaar ka mid ah taleefannada gacanta ee hadda la heli karo oo la jaan qaadi kara. Intaa waxaa dheer, noocyo badan oo ka sii badan ayaa ka fiirsanaya inay ku isticmaalaan taleefannadooda, sida OnePlus. Sidaa darteed, way sii wadi doontaa inay kordhiso joogitaankeeda suuqa 2019.
Haddii aad leedahay taleefan Androic ah oo taageera lacag-bixinta wireless-ka, waad dhici kartaa raadi xeedho wireless ah. In kasta oo adeegsadayaal badani aysan aqoon waxa ugu habboon ee mid lagu doorto. Waa muhiim in la tixgeliyo dhinacyada qaarkood, oo aan hoos ku xusnay.
1 Xeedho wireless ah
2 Dooro awoodda
3 Gelinta booska
Xeedho wireless ah
In ka badan hal munaasabad waan kula soo hadalnay ku saabsan xeedho wireless ah oo loo isticmaali karo telefoonada Android. Waxaa jira fursado badan, oo leh qiimo wanaagsan iyo in aan shaki ku jirin inay u hoggaansamaan dhinaca hawlgalka. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in fiilooyinka wireless-ka ay caadi ahaan yihiin kuwo caalami ah. Markaa macno malahan midka aad dooratay, waxaad awoodi doontaa inaad ku isticmaasho taleefankaaga dhibaato la'aan. Si fiican ayey u shaqeyn doontaa oo waxay kuu oggolaaneysaa inaad lacag ka qaaddo aaladda.
Sababta ay u yihiin caalami waa taas dhammaantood waxay adeegsadaan Qi-kicinta wireless-ku-dallaca. Waa halbeegga rasmiga ah ee arrintan la xiriira waxaana u isticmaala labada shirkadood ee soo saarayaasha taleefanka iyo soo saarayaasha xeedho. Taas macnaheedu waxa weeye in xulashadu aysan noqon mid dhibaato leh, maxaa yeelay qof walba wuu la jaan qaadi doonaa. Waxaa jira dhinacyo dheeri ah oo dheeri ah oo la tixgelinayo, oo aan hoos ku xusnay, taas oo muhiim ku noqon kara xulashadan.
Mid ka mid ah dhinacyada in farqiga u leh xeedho wireless for Android waa wax soo saarka korontada. Tani waa wax u turjumaya xawaare sare ama hooseeya ee taleefanka. Telefoonada oo dhami waxay hada ku taageeraan Qi wireless lacag bixinta 5W iyo 10W xeedho. Marka kani waa ikhtiyaarka ugu ammaansan, kaas oo marwalba ku shaqeyn doona casrigaaga.
In kasta oo ay jiraan telefoonno ku saabsan Android oo bixiya fursado badan. Waxaa jira kuwa taageero u haya awood ballaaran, taasoo u oggolaaneysa taleefanka in lagu soo oogo xawaare sare. In kasta oo dhammaan taleefannada suuqa ku jiraa aysan suurtogal ahayn. Qaar ka mid ah moodooyinka sida Galaxy S9 ayaa taageeri kara ilaa 15W xeedho.
Sidaa darteed, waxay kuxirantahay taleefanka casriga ah ee aad haysato, waxaa jiri kara ikhtiyaar aad adigu aad u xiisaynayso. Maaddaama ay jiri karaan isticmaaleyaal raadiya awoodda ugu badan mar walba marka ay taleefanka ku amraya, si markaa lacagta loo dhammaystiro sida ugu dhakhsaha badan. Dareenkan, waa inaad hubisaa tilmaamaha taleefankaaga, si loo ogaado awoodda ay u adkeysan karto. Gaar ahaan haddii aad ka fekereysay inaad iibsato xeedho 15W. Dhammaan moodooyinka ku jira Android ma taageeri karaan.
Tani waa dhinac kale oo la tixgelinayo, taas oo ah doorbidista isticmaale kasta. Xarkaha wireless-ka ee ku jira Android anaga u oggolow taleefanka in lagu dalaco dhammaan noocyada jagooyinka. Qaarkood waxaad ku dhejin kartaa taleefanka si toos ah, kuwa kale waxaa suurtagal ah in la dhigo taleefanka, kuwa kalena aaladda ayaa si toos ah loo dhigaa. Fursado badan ayaa la dooran karaa macno ahaan in loo isticmaalo xamuulka noocan ah.
Sidoo kale naqshadda ama qaabka xeedho lafteeda Waa wax ay isticmaaleyaal badani hubaal tixgeliyaan. Waxaad kuheli kartaa doorbid dareenkan, taas oo kufiican waxa aad raadineyso. Waxaa jira kuwa raadinaya xeedho yar, kuwo kale oo doonaya mid leh qaab gaar ah, si ay uga caawiyaan taleefanka inuu joogo meel cayiman. Dooro midka adiga kugu habboon.
Sidan oo kale, waxaad ka heli kartaa waxyaabo badan oo ka mid ah lacag-bixinta wireless-ka ee taleefankaaga Android. Waxaan hoosta kaaga tagi doonaa dhowr ikhtiyaar oo aad heli karto maanta oo aad ugu adeegsan karto noocan lacag ah taleefanka. Marka waxaad heli kartaa xeedho ku habboon waxa aad raadineyso.
Xarkaha xaddidan ee Limxems 10W oo ah 13,99 euro
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loo doorto xeedho wireless ah taleefankaaga Android
Fleksy waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo isdhexgalka Giphy iyo hab lagu saxo qoraalka qoraalka
Codsiyada lacag-bixinta mobilada ee Android ayaa laga heli karaa Spain